Shaun T: သင်သိရန်လိုအပ်သောအမြန်အချက် ၅ ချက် - ကျန်းမာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် သတင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> Shaun T: သင်သိရန်လိုအပ်သောအမြန်အချက် ၅ ချက်
Shaun T (သို့) Shaun Thompson သည်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်ကကွက်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏ Insanity နှင့် T25 လေ့ကျင့်ခန်းဒီဗွီဒီများဖြင့်အိမ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုတစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့သည်။
၁။ သူ၏ပထမဆုံးကြံ့ခိုင်ရေးဒီဗွီဒီသည် Hip Hop Abs ဖြစ်သည်
Amazon တွင် Hip Hop Abs DVD ကိုရှာပါ။
ဟိ ကမ်းခြေ ကုမ္ပဏီကသူ့ကို Equinox အတွက်သူ့အလုပ်ကတဆင့်တွေ့ခဲ့တာ၊ သူတို့ကအိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းအသစ်တစ်ခုကိုစလုပ်ဖို့သူ့ကိုတို့ခဲ့တယ်။ Hip Hop Abs သည်ချက်ချင်းအောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးကော်ပီ ၃ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်။
၂။ Shaun T သည်ရူးသွပ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်
Amazon တွင် Insanity Workout DVDS ကိုရှာပါ
BeachBody သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနှင့်ချဲ့ထွင်ရန်ရှာဖွေနေခဲ့ပြီး Shaun T သည်အများဆုံးကြားကာလလေ့ကျင့်မှုပတ်လည်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဤတင်းကျပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းကိုနောက်ပိုင်းတွင် Insanity ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အခက်အခဲများကြောင့်“ DVD ပေါ်တွင်တင်ရန်အခက်ခဲဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း” အဖြစ်စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးချက်ချင်းကျေနပ်နိုင်သောဤခေတ်၌ပင်ရူးသွပ်ခြင်းသည်စီးပွားရေးအရအောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Insanity ၏အရသာကိုခံစားရန်ဤ Shaun T ၁၅ မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူအထက်ပါဗီဒီယိုနှင့်အတူလိုက်ပါ။
၂။ Focus T25 သည် Shaun T ၏နောက်ဆုံးပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်
Shaun T ၏ FOCUS T25 DVD လေ့ကျင့်ခန်းကို Amazon တွင်ရှာပါ
Focus T25 သည် Shaun T ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပရောဂျက်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင် ၂၅ မိနစ်ကြာမြင့်သော DVD ခွေ ၉ ခုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း ၁၁ ခုပါလာသည်။ infomercial လှည့်ကွက်သည်သင်တစ်နေ့လျှင် ၂၅ မိနစ်သုံးရုံဖြင့်တစ်နာရီကြာလေ့ကျင့်ခန်းရလဒ်များကိုရနိုင်သည် ပြင်းထန်သောကြားကာလလေ့ကျင့်မှု မရ။ T25 ကိုရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုအတွက်အထက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
4. Shaun T သည် Choreographer and Dancer ဖြစ်သည်
Shaun T သည် choreographer နှင့် dancer တစ် ဦး အဖြစ် Los Angeles တွင်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် Mariah Carey နှင့်အကပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးကကွက်ပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ယူပါ မရ။ အပေါ်ကသူ့အကခုန်သံကိုကြည့်ပါ။
5. Shaun T သည် ReTweet မှတဆင့်ထွက်လာသည်
Shaun T သည်သူ၏သက်တမ်းကြာချစ်သူ Scott Blokker နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသတင်းကို retweet မှတဆင့်ကမ္ဘာသို့ဝေမျှခဲ့သည်။ သူကသူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ Instagram ပို့စ် (အပေါ်) ကိုမျှဝေခဲ့တယ်။ သူကအရင်တုန်းကလိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုလူသိရှင်ကြားမပြောခဲ့ဘူး။ တောင်းပန်ပါတယ်အမျိုးသမီး
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဆေးလုံးတားဆေး၊ သင်သိရန်လိုသောအချက် ၅ ချက်
Effexor vs. Zoloft: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Cymbalta vs. Lyrica: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အရာ
activated charcoal ကိုသင်အလွန်အကျွံသောက်နိုင်သလား
tylenol နှင့် ibuprofen ဘယ်လောက်ယူနိုင်သလဲ